ဟွမ်ဂယိုအန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ – ၁၀ မေ ၂၀၁၇
၁၈ ဇွန် ၂၀၁၅ – ၁၁ မေ ၂၀၁၇
Yoo Il-ho (ယာယီ)
၂၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉ – ၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ – ၁၅ ဧပြီ ၂၀၂၀
Shim Jae-chul (ယာယီ)
၁၁ မတ် ၂၀၁၃ – ၁၈ ဇွန် ၂၀၁၅
Choi Kyoung-hwan] (ယာယီ)
Kim Ju-hyeon (ယာယီ)
(1957-04-15) ၁၅ ဧပြီ၊ ၁၉၅၇ (အသက် ၆၅)
ယူနိုက်တက်ဖျူးခြားပါတီ (၂၀၂၀ - လက်ရှိ)
လစ်ဘာတီပါတီ (၂၀၁၈ - ၂၀၂၀
Sungkyunkwan University (LLB၊ LLM)
ဟွမ်ဂယိုအန်း သည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသား နိုင်ငံရေးသမားနှင့် စုံစမ်းရေးမှူးတစ်ဦးဖြစ်ကာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ယာယီသမ္မတ၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်၊ တရားရေးဝန်ကြီး အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ သမ္မတ ဘတ်ဂွန်းဟဲ လက်အောက်တွင် တရားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေပြီး နောက်ပိုင်းတွင် သူ့အား နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ သမ္မတအား ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ပြီးနောက်တွင် အခြေခံဥပဒေအရ ယာယီသမ္မတအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ် မေလ ၁၀ရက်နေ့တွင် သမ္မတအသစ် တက်လာပြီးနောက် သူသည် ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။
၃.၁ တရားရေးဝန်ကြီး (၂၀၁၃ - ၂၀၁၅)
၃.၂ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် (၂၀၁၅ - ၂၀၁၇)
၃.၃ ယာယီသမ္မတ (၂၀၁၆ - ၂၀၁၇)
ဟွမ်အား ၁၉၅၇ခုနှစ် ဧပြီ (၁၅)ရက်နေ့တွင် ဆိုးလ်မြို့၌ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ခုနှစ်တွင် အထက်တန်းအောင်မြင်ကာ ၁၉၈၁ခုနှစ်တွင် ဥပဒေဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် (၂၃)ကြိမ်မြောက် အမျိုးသားဥပဒေစာမေးပွဲ (bar exam) ကိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ သူသည် ရှားပါးသော ယားယံသည့်ဖြစ်ရပ်ကြောင့် စစ်မှုထမ်းခြင်း မပြုခဲ့ရပေ။ ၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် ဥပဒေဖြင့် ဘွဲ့လွန် ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၈၂ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဟွမ်သည် Chuncheonခရိုင်ရုံး၌ စုံစမ်းရေးမှူးအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဆိုးလ်ခရိုင်ရုံးနှင့် စုံစမ်းရေးမှူးချုပ်ရုံးတို့တွင် ပြည်သူ့လုံခြုံရေးစုံစမ်းရေးမှူးအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူသည် စုံစမ်းရေးမှူးဘဝဖြင့် အနှစ် (၃၀)ကြာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဘူဆန်ရုံးတွင် စုံစမ်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် ၂၀၁၁ခုနှစ်အထိ လုပ်ကိုင်ပြီးနောက် ၂၀၁၁ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှ ၂၀၁၃ခုနှစ် ဇမ်နဝါရီလအထိ ပစိဖိတ်ဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း၌ ရှေ့နေအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
တရားရေးဝန်ကြီး (၂၀၁၃ - ၂၀၁၅)[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် သမ္မတအသစ် ဘတ်ဂွန်းဟဲ၏ အစိုးရအဖွဲ့တွင် တရားရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုရာထူးဖြင့် အကြီးမားဆုံးသော လုပ်ဆောင်ချက်မှာ မြောက်ကိုရီးယားအမြင်များကို စွဲကိုင်ထားသည်ဟု စွပ်စွဲခံရသော လက်ဝဲယိမ်းပါတီ Unified Progressive Partyအား အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးမှ အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည့် ကိစ္စဖြစ်သည်။ ထိုအမှုမှာ တောင်ကိုရီးယားတွင် လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် အဓိကထိုးနှက်ချက်ဟု အချို့ကပြောခဲ့ကြသည်။
နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် (၂၀၁၅ - ၂၀၁၇)[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀၁၅ခုနှစ် ဧပြီလတွင် လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် လီဝန်ကူး နုတ်ထွက်သွားပြီးနောက် မေလတွင် သမ္မတ ဘတ်ဂွန်းဟဲက ဟွမ်အား ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၅ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၂၀၁၆ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် Seongju ဒေသသို့ သွားရောက်ခဲ့ရာ အမေရိကန်၏ ဒုံးလက်နက်ကာကွယ်​ရေးစနစ် ဖြန့်ကြက်ထားခြင်းကို ဆန့်ကျင်သူများက ဟွမ်အား ကြက်ဥ၊ ရေသန့်ဘူးများဖြင့် ပစ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ထိုစနစ်ကြောင့် ဒေသခံများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စနစ်အား ထိခိုက်စေသဖြင့် ဒေသခံများက ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်။
ဟွမ်ကို ဘတ်ဂွန်းဟဲအစိုးရအဖွဲ့၏ သစ္စာအရှိဆုံးလူအဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ သို့သော် ၂၀၁၆ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရေးအရှုပ်တော်ပုံတွင် သမ္မတ ဘတ်ဂွန်းဟဲက ၎င်း၏အုပ်ချုပ်ရေးကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက် ဝန်ကြီးချုပ် ဟွမ်အား ရာထူးမှ ထုတ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အတိုက်အခံများကြောင့် ဟွမ်အား ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် ဟွမ်က ပီရူးနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသည့် အေးပက် အစည်းအဝေးသို့ သမ္မတကိုယ်စား တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဟွမ်သည် သမ္မတအသစ် တက်လာပြီး​နောက် ၂၀၁၇ခုနှစ် ​မေလ (၁၁)ရက်​နေ့တွင် ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။
ယာယီသမ္မတ (၂၀၁၆ - ၂၀၁၇)[ပြင်ဆင်ရန်]
ယာယီသမ္မတဖြစ်ပြီး​နောက် ပြည်သူသို့ မိန့်ခွန်း​ပြောစဉ်
၂၀၁၆ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၉ရက်နေ့တွင် သမ္မတ ဘတ်ဂွန်းဟဲအား လွှတ်တော်မှ စွပ်စွဲပြစ်တင်ပြီးနောက် အောင်မြင်သဖြင့် သမ္မတ၏ ရာထူးကို ဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရသည်။ သမ္မတနေရာလစ်လပ်နေသဖြင့် အခြေခံဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်က ယာယီသမ္မတအဖြစ် တာဝန်ယူရသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ် မတ်လတွင် အ​​ခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးက သမ္မတအား ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခဲ့သဖြင့် ဟွမ်သည် ယာယီသမ္မတအဖြစ် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် သမ္မတအသစ်ရွေးချယ်ရန် ရွေးကောက်ပွဲအသစ်ကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ဟွမ်က သူ့အနေဖြင့် တာဝန်အလွန်ကြီးကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
သမ္မတရုံးစိုက်ရာ အိမ်ပြာတော်တွင် အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ်
၂၀၁၇ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၂၀၁၂ရွေးကောက်ပွဲက သမ္မတဟောင်း ဘတ်ဂွန်းဟဲ၏ ပြိုင်ဘက် မွန်းဂျယ်အင်းက အနိုင်ရရှိခဲ့ကာ ၂၀၁၇ခုနှစ် မေလ (၁၀)ရက်နေ့တွင် သမ္မတ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဟွမ်သည် သူ၏ ယာယီသမ္မတတာဝန် ပြီးဆုံးခဲ့သည်။
၂၀၁၆ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၉ရက်​နေ့တွင် ယာယီသမ္မတအဖြစ် ကက်ဘိနက်အစည်းအ​ဝေးကျင်းပစဉ်
↑ တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ ရာထူးကထုတ်ပယ်ခံရ - BBC။
↑ Minister's Profile, MOJ, Ministry of Justice, Republic of Korea (accessed December 11, 2016).
↑ "South Korea's Park names new PM after scandal strikes again"၊ Reuters၊ 21 May 2015။
↑ S. Korea's interim leader was Park defender; powers unclear, Associated Press (December 9, 2016).
↑ Park names Justice Minister Hwang Kyo-ahn as new PM။ Yonhap (21 May 2015)။
↑ South Korean prime minister pelted with eggs by protesters, Agence France-Presse (July 15, 2016).
↑ "South Korea's prime minister sacked amid ongoing political crisis"၊ CNN၊2November 2016။
↑ 694일만에 떠나는 황교안…10번째 장수총리။
↑ တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ ရာထူးကထုတ်ပယ်ခံရ - VOA။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟွမ်ဂယိုအန်း&oldid=737942" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ မတ် ၂၀၂၂၊ ၁၄:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။